ဝဋျကွှေးရှိသမြှ ဆကျပွီး ခဈြနဥေီးမယျ – Shinyoon
ကိုယျ့အပျေါမကောငျးမှနျးသိသိရဲ့နဲ့ ဆကျပွီးဖကျတှယျထားတာ ၀ဋျကွှေးဆိုရငျ အဲ့ဒီဝဋျကွှေးကို ကြှနျမ ပြျောပြျောကွီးဆပျမယျ ငိုစခေငျြတဲ့ အခါ ငိုလိုကျမယျ ရယျစခေငျြတဲ့အခါ ရယျလိုကျမယျ လကျလှတျလိုကျရငျ လှတျလပျသှားမယျဆိုတာမှနျး ကြှနျမကောငျးကောငျးကွီးသိပါတယျ ဒါပမေယျ့ အဲ့ဒီ နာကငျြနရေတဲ့ဘ၀ကို ခုံမငျနတေတျတာက ကြှနျမ ၀ဋျကွှေးပါ
နငျ့ကိုကွညျ့ပွီး ပငျပနျးလိုကျတာဆိုတဲ့ စကားလုံးတှမှောလဲ ကြှနျမ တဖွေးဖွေး နသေားကနြပေါပွီ ဘာတှမြေားမကျစရာ ရှိနလေဲဆိုတဲ့ အမေးတှကေိုလဲ နားရညျဝနပေါပွီ ကြှနျမကံကိုက ဒီလိုဖွဈလာဖို့ အကွောငျးဖနျလာတာလေ ။ ကိုယျပြျောမယျထငျပွီး ရပျနတေဲ့အရပျမှာ ၀မျးနညျးစှာငိုကွှေးနရေတဲ့ ကံပေါ့ ကိုယျ့ရှေးခယျြမှုနဲ့ ကိုယျပါ ကြှနျမ ခရီးဆုံးတဲ့ ထိ ဒါမှမဟုတျ ၀ဋျကွှေးကုနျတဲ့အထိ ဆကျလြှောကျခငျြတယျ
လှတျခလြိုကျပါ . . . တဲ့ စကားလေးတဈလုံးထှကျဖို့လောကျ လှယျကူခဲ့မယျဆိုရငျ ကြှနျမ လှတျလပျနတော ကွာရောပေါ့ စာနာလို့ သနားလို့ပွောတဲ့စကားတှမှေနျး ကြှနျမ ကောငျးကောငျးကွီး နားလညျသဘောပေါကျပါတယျ တဈခါတဈရံ ကြှနျမကိုယျကြှနျမ နဲ့ သနားခဲ့တာပါပဲ
ဘာကွောငျ့လဲ ဆိုတဲ့မေးခှနျးတှေ ဘယျနှဈကွိမျ ဘယျနှဈခါပဲ မေးမေး အဖွဆေိုတာ ထှကျမလာခဲ့ဘူး တဈနကေ့ရြငျတော့ နားလညျလာမှာပါဆိုတဲ့အတှေးနဲ့ မလှတျရကျ မပဈရကျခဲ့တဲ့ လကျတဈစုံမှာ ကြှနျမ ဘ၀တှေ ရှိတယျ မြှျောလငျ့ခကျြတှကေော ပွီးတော့ အနာဂတျတှကေော
ရငျဘတျကွီးတဈခုလုံးနဲ့ ရငျးထားခဲ့ရတာလေ လှယျလှယျလေး စှနျ့ပဈလိုကျဖို့ အပွောလောကျ မလှယျခဲ့တာပါ နာကငျြနရေတာထကျစာရငျ ကိုယျ့ဘေးနားမှာရှိနသေေးတယျဆိုတဲ့အသိက ပိုပွီးအဆငျပွပေါတယျ
ကြှနျမ ၀ဋျကွီးတယျလို့ပဲ မှတျပါ မကွငျနာမှနျးသိသိရဲ့နဲ့ မနခေငျြမှနျးသိသိရဲ့နဲ့ ကြှနျမဆကျပွီး ဆှဲထားမိတာ တဈခါတဈလကေတြော့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျလဲ ရှကျမိပါတယျ ဒါပမေယျ့ မရှိလို့ မဖွဈဘူးဆိုတဲ့ စိတျတဈခုနဲ့ ဆကျပွီး တှယျတာမိနတောပါ
၀ဋျကွှေးကုနျသှားတဲ့အခါ ကြှနျမ ပြျောအောငျ နတေတျလာမယျလို့ပဲထငျပါတယျ အခုလောလောဆယျတော့ တဈခကျြပွုံးပွလိုကျရရုံနဲ့ နာခဲ့ရသမြှအားလုံး မသှေ့ားတဲ့အထိ ဆကျပွီး ရူးမိုကျနမေိတုနျးပဲ
တဈနကေ့ရြငျ နားလညျလာမှာပါဆိုတဲ့ အတှေးနဲ့ ဆကျပွီးဆှဲထားနမေိတုနျးပဲ စိတျမနာခငျြခဲ့တာမဟုတျပါဘူး စိတျမနာတတျခဲ့တာပါ ဘယျသူတှေ ဘယျလိုပဲ ပွောနပေါစေ ကြှနျမတော့ ဆကျပွီး နာကငျြနလေဲ ဆကျပွီး ဆှဲထားမိနဥေီးမှာပါ
ကြှနျမကိုအဖွဈကို ဘယျသူမှ ခြှတျဖို့ မကွိုးစားနဲ့ ၀ဋျကွှေးကွီးလိုကျတာလို့ပဲ မှတျပါ ပွီးတော့ အပွဈတငျပါ မသနားနဲ့ ကိုယျ့အမှားနဲ့ကိုယျပဲလေ ကြှနျမတော့ ၀ဋျကွှေးရှိသမြှ ဆကျပွီး ခဈြနဥေီးမယျ ။
ကိုယ့်အပေါ်မကောင်းမှန်းသိသိရဲ့နဲ့ ဆက်ပြီးဖက်တွယ်ထားတာ ၀ဋ်ကြွေးဆိုရင် အဲ့ဒီဝဋ်ကြွေးကို ကျွန်မ ပျော်ပျော်ကြီးဆပ်မယ် ငိုစေချင်တဲ့ အခါ ငိုလိုက်မယ် ရယ်စေချင်တဲ့အခါ ရယ်လိုက်မယ် လက်လွှတ်လိုက်ရင် လွတ်လပ်သွားမယ်ဆိုတာမှန်း ကျွန်မကောင်းကောင်းကြီးသိပါတယ် ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီ နာကျင်နေရတဲ့ဘ၀ကို ခုံမင်နေတတ်တာက ကျွန်မ ၀ဋ်ကြွေးပါ
နင့်ကိုကြည့်ပြီး ပင်ပန်းလိုက်တာဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေမှာလဲ ကျွန်မ တဖြေးဖြေး နေသားကျနေပါပြီ ဘာတွေများမက်စရာ ရှိနေလဲဆိုတဲ့ အမေးတွေကိုလဲ နားရည်ဝနေပါပြီ ကျွန်မကံကိုက ဒီလိုဖြစ်လာဖို့ အကြောင်းဖန်လာတာလေ ။ ကိုယ်ပျော်မယ်ထင်ပြီး ရပ်နေတဲ့အရပ်မှာ ၀မ်းနည်းစွာငိုကြွေးနေရတဲ့ ကံပေါ့ ကိုယ့်ရွေးချယ်မှုနဲ့ ကိုယ်ပါ ကျွန်မ ခရီးဆုံးတဲ့ ထိ ဒါမှမဟုတ် ၀ဋ်ကြွေးကုန်တဲ့အထိ ဆက်လျှောက်ချင်တယ်
လွတ်ချလိုက်ပါ . . . တဲ့ စကားလေးတစ်လုံးထွက်ဖို့လောက် လွယ်ကူခဲ့မယ်ဆိုရင် ကျွန်မ လွတ်လပ်နေတာ ကြာရောပေါ့ စာနာလို့ သနားလို့ပြောတဲ့စကားတွေမှန်း ကျွန်မ ကောင်းကောင်းကြီး နားလည်သဘောပေါက်ပါတယ် တစ်ခါတစ်ရံ ကျွန်မကိုယ်ကျွန်မ နဲ့ သနားခဲ့တာပါပဲ
ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေ ဘယ်နှစ်ကြိမ် ဘယ်နှစ်ခါပဲ မေးမေး အဖြေဆိုတာ ထွက်မလာခဲ့ဘူး တစ်နေ့ကျရင်တော့ နားလည်လာမှာပါဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ မလွတ်ရက် မပစ်ရက်ခဲ့တဲ့ လက်တစ်စုံမှာ ကျွန်မ ဘ၀တွေ ရှိတယ် မျှော်လင့်ချက်တွေကော ပြီးတော့ အနာဂတ်တွေကော
ရင်ဘတ်ကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့ ရင်းထားခဲ့ရတာလေ လွယ်လွယ်လေး စွန့်ပစ်လိုက်ဖို့ အပြောလောက် မလွယ်ခဲ့တာပါ နာကျင်နေရတာထက်စာရင် ကိုယ့်ဘေးနားမှာရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့အသိက ပိုပြီးအဆင်ပြေပါတယ်
ကျွန်မ ၀ဋ်ကြီးတယ်လို့ပဲ မှတ်ပါ မကြင်နာမှန်းသိသိရဲ့နဲ့ မနေချင်မှန်းသိသိရဲ့နဲ့ ကျွန်မဆက်ပြီး ဆွဲထားမိတာ တစ်ခါတစ်လေကျတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လဲ ရှက်မိပါတယ် ဒါပေမယ့် မရှိလို့ မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ စိတ်တစ်ခုနဲ့ ဆက်ပြီး တွယ်တာမိနေတာပါ
၀ဋ်ကြွေးကုန်သွားတဲ့အခါ ကျွန်မ ပျော်အောင် နေတတ်လာမယ်လို့ပဲထင်ပါတယ် အခုလောလောဆယ်တော့ တစ်ချက်ပြုံးပြလိုက်ရရုံနဲ့ နာခဲ့ရသမျှအားလုံး မေ့သွားတဲ့အထိ ဆက်ပြီး ရူးမိုက်နေမိတုန်းပဲ
တစ်နေ့ကျရင် နားလည်လာမှာပါဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ ဆက်ပြီးဆွဲထားနေမိတုန်းပဲ စိတ်မနာချင်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး စိတ်မနာတတ်ခဲ့တာပါ ဘယ်သူတွေ ဘယ်လိုပဲ ပြောနေပါစေ ကျွန်မတော့ ဆက်ပြီး နာကျင်နေလဲ ဆက်ပြီး ဆွဲထားမိနေဦးမှာပါ
ကျွန်မကိုအဖြစ်ကို ဘယ်သူမှ ချွတ်ဖို့ မကြိုးစားနဲ့ ၀ဋ်ကြွေးကြီးလိုက်တာလို့ပဲ မှတ်ပါ ပြီးတော့ အပြစ်တင်ပါ မသနားနဲ့ ကိုယ့်အမှားနဲ့ကိုယ်ပဲလေ ကျွန်မတော့ ၀ဋ်ကြွေးရှိသမျှ ဆက်ပြီး ချစ်နေဦးမယ် ။